लचिला नियामक-स्प्रेड दरबाट पछि हट्दै राष्ट्र बैंक, पुँजीमा बीमा समिति 'नरम'
लचिला नियामक-स्प्रेड दरबाट पछि हट्दै राष्ट्र बैंक, पुँजीमा बीमा समिति ‘नरम’
कर्पोरेट नेपाल , १९ भाद्र २०७६, बिहीबार, ०९:५४ am
काठमाडौं । सुरुमा निकै तामझाम र फुर्तिका साथ नयाँ व्यवस्था अघि सार्ने दुई नियामक निकायहरु पछिल्लो समय लचिलो बन्दै गएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नियमनको जिम्मा पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिपछि जारी गरिएको परिपत्रबाट पछि हट्ने तयारीमा छ । त्यस्तै, बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरु प्रति लचिलो बनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले काउण्टर साइक्लिकल बफर र स्प्रेड दर गणना बिधिलाई आवश्यक संसोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सिग्नलपछि यतिबेला राष्ट्र बैंक ‘फेस सेभिङ’को विकल्प खोजिरहेको श्रोत बताउँछ । नेपाल बैंकर्स संघले विज्ञप्ति नै निकालेर २५ प्रतिशत नाफा घट्ने र नेपालको पुँजी बजार ओरोलो लाग्ने घोषणा गरेपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई प्रेसर परेको थियो । चौतर्फी घेरा बन्दीमा परेको महसुश गरिरहेका खतिवडाले राष्ट्र बैंकलाई लचिलो बन्न संकेत दिएका थिए । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकले परिमार्जनको सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गत सोमबार परिपत्रको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने सन्देश छाडेपछि पुँजी बजारमा २० अंकको उछाल आएको थियो । ‘राष्ट्र बैंकले काउण्टर साइक्लिकल बफर र स्प्रेड दर गणना बिधी परिमार्जन गर्ने हल्ला चलेपछि बजार बढेको हो’, एक लगानीकर्ताले भने ।
उता, बीमा समिति पनि पुँजी पुर्याउन नसक्ने बीमा कम्पनीहरु प्रति लचिलो बनेको छ ।
चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसक्ने बीमा कम्पनीहरुलाई साउनको पहिलो हप्ता नै स्पष्टीकरण सोधेको समितिले यतिबेला भने ‘कल इन एडभान्स’को सुविधा दिएको छ । बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई समितिमै बोलाएर कल इन एडभान्समा पैसा राख्न निर्देशन दिएको हो । ‘पुँजी पुर्याउन नसक्ने कम्पनीका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर कल इन एडभान्समा पैसा राख्न निर्देशन दिएका छौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले भने । बीमा कम्पनीहरुलाई कारवाही गर्दा बढ्दो बीमा बजारमै नकारात्मक सन्देश जाने निष्कर्षसहित समितिले सुबिधा उपलब्ध गराएको हो । समितिले तेश्रो पटक म्याद थपिदिएर जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब चुक्ता पुँजी असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सो अवधीमा नौ वटा बीमा कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्याउन नसकेपछि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । हाल प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ, सुर्या लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । निर्जीवन बीमा कम्पनी तर्फ भने युनाइटेड, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, लुम्बनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
'स्प्रेड रेट'मा पुर्नविचार गर्न बैंकर्स संघको राष्ट्र बैंकसँग आग्रह
राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले सेयर बजारमा निरन्तर पहिरो
एक हप्ताभित्र उपयुक्त विकल्पसहित नआए पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई कारवाही गर्छाै
नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो ओमी र नागरिक लघुवित्तलाई मर्जरको अनुमति
मौद्रिक नीतिको अध्ययन गर्दै संसदीय समितिः सञ्चालकको उमेर, स्प्रेड दर र बैंकलाई…
बैंकास्योरेन्स बन्द, ऋणीलाई बोझ हटाईयो